Izixhobo zombane ezingaqhushumbayo Abavelisi-iChina-izinto zombane ezingaqhushumbayo Ababoneleli & neFactory
I-BQC53 uthotho lwe-explosion-proof electromagnetic starter
5. Esebenzayo kwiqela lobushushu nguT1 ~ T4 / T5 / T6;
6. Ingasetyenziselwa ukuqala okude okanye ukulawula ngokuthe ngqo ukuqala, ukumisa kunye nokuhamba phambili kunye nokuguqulwa kwesigaba sesithathu se-squirrel cage motor, kwaye inokukhusela ukugqithiswa kwemoto, phantsi kwe-voltage, isiphaluka esifutshane kunye nokungaphumeleli kwesigaba.Kufuneka kwakhona kubekho ukuhanjiswa kwamandla kwangaphambili kunye nokukhuselwa ngexesha lofakelo.
LBZ-10S uthotho Uqhushumbo-ubungqina umsebenzi post
6. Isetyenziswe kwiinkqubo zokulawula umbane, njengokuhanjiswa komyalelo kunye nokubeka iliso kwimeko kuphela.
Uluhlu lwe-LBZ-10 Isithuba sokusebenza ubungqina bokudubula
series Explosion-ubungqina ukuhamba iswitshi
6. Guqula imiqondiso yomatshini kwiimpawu zombane kwisiphaluka solawulo njengolawulo lwezenzo zomatshini okanye iinkqubo.
dLXK series Explosion-ubungqina bokuhamba iswitshi
SW-10 series Explosion-ubungqina ukukhanyisa iswitshi
6. Njengokutshintsha kokulawula izibane zokukhanyisa okanye izixhobo zombane ezincinci, xa zifakwe Kufuneka kubekho ukhuseleko lwangaphambili.
BXK58 series Ibhokisi yokulawula ukuqhuma
6. Isetyenziswe kwiinkqubo zokulawula umbane ukwenzela ukuhanjiswa komyalelo kunye nokubeka iliso kwimeko.
PBb series Positive uxinzelelo uqhushumbo-ubungqina ibhodi yokuhambisa ibhodi
6. Ukusasazwa kwamandla okukhanyisa okanye iintambo zombane, izixhobo zombane kwi-/off control;kwakhona njengenkqubo yokwenziwa kwemiqondiso esembindini kunye nenkqubo yolawulo oluphakathi.
7. Lawula ukuqala ngokuthe ngqo, ukumisa kunye nokuhamba phambili kunye nokubuyisela umva kwemoto, kunye nokugqithiswa, Isiphaluka esifutshane kunye nokukhuselwa kwe-voltage.
6. Ukusasazwa kokukhanyisa okanye iintambo zombane, izixhobo zombane ekulawuleni ukucima okanye ukuhlolwa kunye nokuhanjiswa kokugcinwa.